Ngaphandle kweli hlabathi lanamhlanje leemifanekiso zekhomputha ze-computer, ii- apps , kunye neendlela eziphezulu zokuqulunqa i-3D, kusekho into ebalulekileyo kwaye inomsebenzi malunga nokudala imodeli yesikali sokwenza i-design yakho, kwaye yindlela eqinisekileyo yokubonelela ngengqiqo yakho Ukusekwa kwendlela yokusebenza kuyakubukeka njengobomi bokwenene.
Umzekelo omhle wendlela yokuyila imodeli yindlela yokwenza uvakalelwe ngendlela ebonakala ngayo isikhala kunye nokuqwalasela indlela abaqhubi abaza kuhamba ngayo ngaphakathi kwendawo njengoko icebo lifuna.
Umzekelo omhle uphinde unikeze umklami obalaseleyo ngethuba lokuvavanya ukukhanya kunye nokusekwa kweendawo ezivela kwi-"picture picture" efana noThixo, ukubonelela ithuba lokudlala ngamathuba okudala ngelixa usebenza kwiikinks.
Iimpahla kunye nezinto eziza Kufuneka
Amapensela kunye neerasers
Ibhodi yeGator okanye iBhodi yeFoam / Foamcore (isiseko)
I-styrofoam (yokudweba / ukukrola kwiimilo)
Ibhodi yemyuziyam (kwiindonga / ukwahlukana)
Ibhodi yomzobo okanye i-cardstock
Umgca okanye umgca wokuloba (kwizinto ezindizayo)
Izinto eziphathekayo zamakhethini amanani, amaphiko, iithebhu kunye nezinye izinto
Iifowuni ezixhaswayo zokubumba
Umncinci, idoli okanye imodeli yesilinganiso / imodeli ebekiwe (umzila wesitimela, i-nautical okanye i-aircraft parts); imithi, izinto, iimpahla kunye nokunye)
Izinto eziprintiweyo ze-3D okanye izixhobo
Yakha ingqiqo yakho yokwenza umxholo emva kokuba uhlalutye ngokucophelela iskripthi, uphando ngeendlela ezifanelekileyo zeembali kunye namaxesha, kwaye ucacise iindlela zokudala ukuhlaziya iindatshana zokubonisa kwiindlela ezibonakalayo.
Beka ezi ngcamango phantsi kwimizobo kunye nakwiikhonkco zokubonisa kunye nengxoxo kwiintlanganiso kunye nomlawuli, abanye abaqulunqiyo kwimiboniso, kunye nabasebenzi bakho bekhontrakthi yekhontrakthi. Qinisekisa ukuba uqaphele ngokucacileyo ixesha elifanelekileyo lembali (nokuba yintlandlolo okanye ngokuchazwa ngokutsha komsebenzi weklasi), kwaye uxoxe ngokuchazwa kweso sihlandlo ngaphambi kwexesha kunye nomlawuli, umyili wezambatho kunye nomklami wokukhanyisa .
Xa ubonisa umbono wakho wendalo, qaphela imibala ephawulekayo, imibala, okanye ezinye izinto, njengoko ezi ziya kuthintela yonke into ekuqondiseni nasekukhuseleni, ukukhanyisa ukukhanya, kunye nokukhetha iingubo.
Tweak zakho iindlela emva kwempendulo, ngoko udwebise ngokusemthethweni umxholo wakho we-design design. Qinisekisa ukuba unayo yonke ingcaciso yobugcisa oyifunayo kwindawo kunye nobukhulu obulwayo.
Ukudala Ibhokisi leMiboniso yeeTheater
Emva koko, kuya kufuneka ukhethe ibhokisi yemodeli yemidlalo yendawo yakho, ukuba awunayo.
Oku kufuneka kube yinto encinane eyakhiweyo, isigxina sesithuba sakho sokusebenza usebenzisa inqamle yentloko yakho, ibhodi yemyuziyamu kunye nokunye ukubonisa ubungakanani besigaba sakho okanye indawo yokusebenza, ukusuka kwiprocenium echanekileyo kwiiphiko, izindonga, kunye ne-rake / phansi. Qinisekisa ukuba uquka zonke iinkalo ezifikelelekayo kwinqanaba lakho, oko kuthetha ukuba phantsi kwecandelo (ukuba indawo yakho inezithuthi okanye izithuba ezingaphantsi kweendawo), i-backstage kunye neendawo zamaphiko, kunye nazo zonke iingeniso kwaye ziphuma
Umgangatho webhokisi yemodeli yakho yemidlalo, kunye neenjini zakho ezilandelayo, kufuneka kube ngu-1:24, okanye i-intshi yeekota nganye inyawo. Ukuba ukhululekile kakhulu ngobukhulu obukhulu, ungaphinde uhambe ngeesentimitha enye kwisantya ngasinye (1:12 scale).
Xa udala ibhokisi yefomathi yemidlalo, ungakulibala ukudala iinguqu ezichanekileyo zeenguqu zakho zendawo, amakhethini, imida, kunye namathebhu, mhlawumbi usebenzisa iincwadi, i-cardstock, okanye izinto ezixhaswa ngamakhadikhadi.
Xa usuqedile ngebhokisi yefomathi yakho, yenza upende yonke into emnyama, usebenzisa ipeyinti elimnyama elimnyama. Ngoku xa udala imodeli yakho yesilinganisi uze ungeze ezo zinto kwi-box box space, ezi zinto ziya kulahla kwiso, njengokuba zenza ubomi boqobo.
Ukudala Umzekelo weSketch okanye "Umzekelo Omhlophe"
Ngaphambi kokudala imodeli yokugqibela yesilinganiselo sakho, kusoloko kunceda ukwakha ingqungquthela yesiseko "yemodeli" eyakuvumela ukuba uzame ubunzima bakho kunye neengcamango ezinzima kwi-3D ngaphambi kokuba uqhubekele kwinguqu yokugqibela. Le nguqu ngamanye amaxesha ubizwa ngokuba ngu "Mzekelo omhlophe" njengento engadliyo kunye nokunye malunga nezinto zokuqala 'ezinkulu'.
Unokwenza isigqibo sokwenza okungaphezulu kweyodwa - akuqhelekanga ukuba abayilimbi basebenze imodeli engaphezulu kweyodwa xa beceba ukuyila ukulungiselela ukujongana nokubonakala kwendlela ebonisa ngayo, kwaye banokubaluleka kakhulu ekuhlaziyweni kwangaphambili kunye nomlawuli wezobuboniso njengoko uceba ukulungiselela indawo ebalulekileyo yembali kunye nokukhusela iimfuno.
Ukusebenzisa ubukhulu obufanayo kunye nalabo abakhethiweyo kwibhokisi yakho yeshashalazi (mhlawumbe i-1/2 okanye i-1/4 ngeenyawo), umzobo kwaye unqume ubukhulu bemilinganiselo kunye nezinto eziphambili usebenzisa i-stock card ekhoyo kunye ne-tape, kwaye sebenzisa imibala eyahlukileyo ephezulu (okanye nokuba nje omnyama nomhlophe) ngenxa yezinto zangaphambili kunye neemeko zangaphambili. Gcoba izinto ezongezelelweyo kwipeni, ipensela okanye ummaki omhlophe.
Ukudala umzekelo woMfanekiso weSizwe oMiselweyo weScenic Design Scale Model
Xa usugqibile amanqaku akho kwiintlanganiso zakho kunye nomlawuli kunye nomzobo weskripthi, lixesha lokudala imodeli yesikolo esesikweni.
Xa kufika kule nxalenye yenkqubo yokudala imodeli, kubalulekile ukuqwalasela ukuba zeziphi izinto kunye nezinto zokwakha eziza kusebenza kuwe. Xa kufikelelwe kwisakhiwo salo mzekelo, abaninzi abayili bemveliso basebenzisa i-Foam Board (okanye i-Foamcore), ngelixa abanye bathanda iBhodi yeGator.
I-Gator Board ingaba yinzuzo enkulu, njengoko inzima kwaye iqinile. Kunzima kunokuba i-foamcore kwaye ihlala ihleli. Kukulungele ngakumbi ukusebenza kunye nobumba obumanzi, amapende okanye ezinye izinto ezifuna ixesha lokuma. Nangona kunjalo, iBhodi yeGator ayinayo i-asidi-free, ngoko ayiyi kuhlala ngonaphakade-into ebalulekileyo ukugcina engqondweni ukuba unakho ukubonisa iimpawu zakho esidlangalaleni.
Ngakolunye uhlangothi, ngelixa i- Foamcore ingekho nzima njengeGator Board, ifumaneka kwiintlobo ze-asidi-ezibalulekileyo-kubalulekile ukuba ubonise umsebenzi wakho - kwaye kulula ukusebenzisana ngokubanzi kwiBhodi yeGator. Kwakhona kulula ukunqumla (ngakumbi ukuba usebenzisa ii-knto Acto knives).
Ukuqhubeka kunye nobukhulu bezinga oye wagqiba ngalo ekuqaleni, sebenzisa iprogram yakho, ukuphakama kunye namanye amaxwebhu obugcisa njengendlela yokubhekisa ukuze udwebe ngokucophelela kwaye unqume ngasinye sezinto eziphambili zoyilo eziza kuhamba kwindawo yakho yomzekelo.
Sebenzisa i-glue ukudala izixhobo eziphathekayo, ezihambayo kuphela - ungathinteli nantoni na into kwimodeli ngokwayo okanye komnye nomnye.
Ungakulibali ukuba imodeli yakho yokulinganisa kufuneka ifake konke oku kulandelayo xa kufikelelwe kwisicwangciso sakho sokugqibela sokuqulunqwa:
Zonke iingeniso kwaye ziphuma
Zonke izinto ezibukrakra eziza kufuneka zakhiwe ukuvelisa
Zonke izinto ezihambayo eziyimfuneko ezifunekayo ekuyiyileni, kunye nemiboniso yangempela yendlela eso sizathu siya kusebenza ngayo. (Ziziphi izicatshulwa eziza ku funeka ziqhutywe?
Zonke iimpahla ezinkulu.
Cwangcisa imodeli yakho ngepende, ipensela, kunye neengubo. Musa ukulibala ukuba lichaneke kangangoko kunokwenzeka kumboniso wakho wokugqibela xa kuziwa kwimbala yakho, iinkcukacha, kunye nemifanekiso! Ngokuqinisekileyo umzekelo wemodeli yakho, kwaye ngakumbi xa ubonakalisa umbono wakho wokugqibela wokuvelisa, kuya kuba luncedo kunabo bonke abantu abavela kubakhi bakho bobugcisa kunye nabapendeli, kubasebenzi bokudala njengomyili wezinto zokukhanyisa , oza kusebenzisa okanye ukubhekisela kwisikali sakho imodeli ngokusondeleyo xa efika kunye nokuvelisa ukukhanya kunye nokuvavanya ukubeka iindawo ezithile kunye nokuhlanganiswa.
Njengoko 'ugqoka' imodeli yakho kunye neengcambu zokugqibela ezibandakanya iimpahla ezinkulu kunye nezinto ezibukhali, khumbula kwakhona ukugcina ezi zinto kumbono wakho. Isihlalo asikho sihlalo nje ngokuba uSihlalo waseFranklin we-Mid-Century asikho isiFrench Bergère.
Ngenhlanhla, unokufumana ezininzi iindlela ezingabizi kwiimpahla ezincinane ezivela kubanikezeli abancinci, umzila wesitimela kunye nabathengisi bamadola, kunye nakwiikethi zemizekelo. Ngamanye amaxesha unokuthenga izinto eziprintiweyo ze-3D ezivela kwi-intanethi ezizenzileyo zisebenzisa i-3D printers. Abanye abaqulunqi bemveliso yefilimu ephakamileyo kunye nabaqulunqi be-Broadway abaqingqiweyo, njengoKacie Hultgren, ngokwenene basebenzisa umshicileli we-3D njengoMenziBot ukushicilela izinto eziprintiweyo ze-3D kwimifanekiso yazo.
Musa ukulibala abantu! Faka phakathi amanani afakwe ngokufanelekileyo kwimodeli yakho yokugqibela. Unokwenza ezi zivela kwi-Foamcore, kwikstock, okanye usebenzise ngokucacileyo u-1:24 okanye i-1:12 imizekelo yamatye okanye i-mannequins.
Xa uzalisekile, imodeli yakho yohlobo loyilo lobugcisa kufuneka ibe ngumsebenzi omncinci wobugcisa, ukubonelela ukubonakaliswa nokusebenza kweendlela ozobekwa ngayo umboniso uza kukhangela, usebenze, kwaye uchaze iindatshana entliziyweni yebali.
Futhi ungakulibali ukuyigcina! Yinakekele kakuhle imodeli yakho yokulinganisa kwaye uyigcine ngokucophelela. Awukwazi ukuba uya kuba luncedo kuni kwixesha elizayo, nokuba ngaba umboniso, ugqozi, okanye ukubhekiselele ngqo kwiimvuselelo, ukubuyisela, ukutyelela, ukutyelela iindwendwe zikazwelonke kunye nokunye.
Umncintiswano weMdanso wabantwana
Inyaniso yeBull Shark Facts (Carcharhinus leucas)
Iingxowa-mali zezopolitiko eMelika
I-Analytical Chemistry Inkcazo
Amagama angamaHebhere kuMantombazana kunye nokuThetha kwabo